१ सय ५० यात्रु बोकेको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो, के भन्छन् क्याप्टेन विजय लामा ? « Pahilo News
१ सय ५० यात्रु बोकेको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो, के भन्छन् क्याप्टेन विजय लामा ?
प्रकाशित मिति : 13 September, 2016 3:35 pm
२८ भदौ । आज अपरान्ह नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ । आज पौने १ बजे भारतको नयाँ दिल्लीबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित काठमाडौं आएको उडान नम्बर आरए २०६ को जहाज अवतरण हुने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको चक्कामा खराबी देखिएपछि त्यहाँ कार्यरत ड्युटी अफिसरले देखाएको सावधानीका कारण दुर्घटना हुनबाट जोगिएको हो । सो विमानमा चालक क्याप्टेन विजय लामा थिए । सकुशल विमान अवतरण गराएका क्याप्टेन लामाले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाएः
अरु बेला जसरी नै मैले जहाजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराउने तयारी गरेको थिएँ । ‘ल्याण्डिङ’ सामान्य नै थियो । ल्याण्डिङका क्रममा मैले कुनै पनि त्यस्तो असहज महसुस गरेको थिइनँ । यतिसम्म कि म र यात्रुहरुलाई पनि विमानको चक्कामा खराबी आएको कुरा थाहा थिएन ।
विमानस्थलको ड्युटीमा विवेक थापा र सविता केसी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले त्यो कुरा थाहा पाउनु भएछ । त्यसपछि उहाँहरु मसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनुभयो । उहाँहरुले अवतरणका क्रममा सबै पूर्वसावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले पनि त्यतिबेलासम्म एम्बुलेन्स, दमकलसहित सबै पूर्वतयारी गर्नुभएको थियो । मैले त अवतरणका क्रममा पनि ‘नर्मल’ ठानेको थिएँ । यदि उहाँहरुले सूचना नदिनुभएको भए निकै ठूलो दुर्घटना हुने थियो । ठूलो दुर्घटनाबाट हुनबाट विवेकजी र सविताजीले बचाउनुभयो । म उहाँहरुलाई कोटिकोटी नमन भन्न चाहन्छु ।
उहाँहरुले सावधानी अपनाउँदा १ सय ५० जना यात्रुसहितको नेपाल वायुसेवा निगमको विमानलाई सकुशल अवतरण गराउन हामी सफल भयौँ । मसँगै रहनुभएकी क्याप्टेन सुवर्ण अवाले र विमान परिचालिकाहरुको सहयोग पनि महत्वपूर्ण रह्यो । उहाँहरु सबैले अलिकति पनि नआत्तिकन सहयोग गर्नुभयो । विमानमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चढ्नुभएकोले अलि बढी चर्चा भयो । तर, म विमान चालक हुँ, मेरा लागि भीआइपी, भीभीआइपी सबै उस्तै हुन् । मैले सबै यात्रुलाई सकुशल अवतरण गर्न सकेँ । म मेरा सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपाल वायुसेवा निगमले राम्रो तालिम दिएको छ भन्ने प्रमाणित आज भएको छ । सबैले सावधानी नअपनाएको भए जे पनि हुने थियो । सबै सकुशल भयौँ । फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु ।